မြင့်မြတ် နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ သတင်းတွေ အပေါ် တုန့် ပြန် ပြောဆို လာတဲ့ ယုန်လေး – Shwewiki.com
သြဂုတ်လ ၉ရက်နေ့ ညပိုင်း မှာ တော့ ယုန်လေး ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဆိုတော် လင်းလင်းကို ပြောဆို ခဲ့တဲ့ သနင်းတွေ Facebookမှာ ပျံ့နှလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်း ထွက်ပေါ်လာမှုနဲ့ သတ်သတ် ပြီး ယုန်လေးရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ မြင့်မြတ်ဟာ…ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်စေမယ့် စကားမျိုး မပြောခဲ့ကြောင်း ယခုလိုပြောပြ လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း မြင့်မြတ်သည်…။ ကျွန်တော့် ကို အတူတူရှိပြီး မဖြစ် သင့်တာ..မဖြစ်အောင် အားပေးခဲ့တယ် . ထိန်းပေးခဲ့တယ် ….။ဘယ်သူ့ကို မှအမုန်းတရားမရှိပါ …။ဘယ်သူ့ကို မှ လည်း ဘာမှ ပြောဆိုချင်းမရှိပါခင်များ…။ကျွန်တော်လည်း စိတ်သက်သာ သွားရင်
Fb ပြန်သုံးပြီး . အရင် လို ပုံမှန် ပြန်လည်ပတ်ပါမည် ခင်များ… ဆိုပြီး ယုန်လေးရဲ့ ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထား တာတွေ့ရပါ တယ်။
ပရိသတ် ကြီးရေ မနေ့က အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့ ခဲ့တဲ့ သတင်းဟာ လုပ်ကြံ ကောလဟာလ သတင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခုလိုအဆုံးထိ ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Page မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင် ရှိပါတယ်နော်…နောက်များမှာလည်း အခုလိုဆယ်လီတို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအုံးနော်….
မွငျ့မွတျ နဲ့ ပတျသကျ တဲ့ သတငျးတှေ အပျေါ တုနျ့ ပွနျ ပွောဆို လာတဲ့ ယုနျလေး
သွဂုတျလ ၉ရကျနေ့ ညပိုငျး မှာ တော့ ယုနျလေး ကိစ်စ နဲ့ ပတျသတျပွီး အဆိုတျော လငျးလငျးကို ပွောဆို ခဲ့တဲ့ သနငျးတှေ Facebookမှာ ပြံ့နှလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီသတငျး ထှကျပျေါလာမှုနဲ့ သတျသတျ ပွီး ယုနျလေးရဲ့ အခဈြဆုံး သူငယျခငျြး ဖွဈသူ မွငျ့မွတျဟာ…ဘယျသူ့ကိုမှ ထိခိုကျစမေယျ့ စကားမြိုး မပွောခဲ့ကွောငျး ယခုလိုပွောပွ လာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြး မွငျ့မွတျသညျ…။ ကြှနျတေျာ့ ကို အတူတူရှိပွီး မဖွဈ သငျ့တာ..မဖွဈအောငျ အားပေးခဲ့တယျ . ထိနျးပေးခဲ့တယျ ….။ဘယျသူ့ကို မှအမုနျးတရားမရှိပါ …။ဘယျသူ့ကို မှ လညျး ဘာမှ ပွောဆိုခငျြးမရှိပါခငျမြား…။ကြှနျတျောလညျး စိတျသကျသာ သှားရငျ
Fb ပွနျသုံးပွီး . အရငျ လို ပုံမှနျ ပွနျလညျပတျပါမညျ ခငျမြား… ဆိုပွီး ယုနျလေးရဲ့ ဖဘေု့တျ စာမကျြနှာမှာ ရေးသားထား တာတှရေ့ပါ တယျ။
ပရိသတျ ကွီးရေ မနကေ့ အှနျလိုငျးမှာ ပြံ့နှံ့ ခဲ့တဲ့ သတငျးဟာ လုပျကွံ ကောလဟာလ သတငျးပဲ ဖွဈပါတယျနျော။ အခုလိုအဆုံးထိ ဖတျရှုပေးတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ Page မှ အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျ ရှိပါတယျနျော…နောကျမြားမှာလညျး အခုလိုဆယျလီတို့ရဲ့ သတငျးမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးပွညျပသတငျးမြားကို အခြိနျနှငျ့တပွေးညီတငျဆကျပေးမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပျပေးသှားကွပါအုံးနျော….